Internet Connection type — MYSTERY ZILLION
October 2009 edited October 2009 in Internet & Email
အကို အမ များခင်ဗျား....
Internet connection type ဘယ်နှစ်မျိုးရှိလဲ သိချင်ပါတယ်.......
အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးပါ....ဟီး ဖြစ်နိုင်ရင် ပေါ့.....
ဥပမာ... ADSL , Broadband , တို့လိုပေါ့
ip star ကိုလည်း broadband satellite လို့ ခေါ်တယ်ဆိုတာလည်း မှန်ပါသလား ခင်ဗျာ....
သေချာ ရှင်းပေးကြပါ....အမှိုက်ပုံကို .... ကျေးဇူးပါ...
October 2009 edited October 2009 Moderators
မိုးနတ်သားလေး wrote: »
အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးပါ....ဟီး :dဖြစ်နိုင်ရင် ပေါ့.....
သေချာ ရှင်းပေးကြပါ....အမှိုက်ပုံကို .... :d ကျေးဇူးပါ...
မိုးနတ်သားလေးရေ အဲကိစ္စကို ပြောကြဆွေးနွေးထားကြတဲ့ နေရာတစ်ခုရှိပါတယ်...သေချာလေးပြန်ရှာကြည့်ပါဦး :p:p
October 2009 edited October 2009 Registered Users
ကို ပရစ် ...ဟီး ...ကို ကြီး ရေ ....ကျနော်ကို ရှာပြီး ပြန်တင်ပေးပါ လား ကျနော်ရှာတာ မတွေ့လို့ ပါ .......ကျေးဇူး ပါ:d
မိုးနတ်သားလေး မေးထားတာကို ဖြေချင်လို့လှည့်ပတ်တော့ ရှာတာ.. တွေ့တော့တွေ့တယ်ဗျ.. ပြည့်စုံလား မစုံလားတော့ သေချာ မသိဘူးဗျ....ဒီမှာ သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ဆွေးနွေးထားတာလေးတွေ ရှိပါတယ.်...
အရင်ကတော့ အင်တာနက် service ပေးတဲံ့ ISP နှစ်ခု ရှိတယ်ဗျ... အဲဒါတွေကတော့.. မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး. MPT ရယ်.. မြန်မာတယ်လီပို့.. Bagan Net ရယ်ဆိုပြီး.တော့.ရှိတာပါ။
မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးကတော့ ADSL လိုင်းရယ် iP Star ရယ် အပြင်. dial up လို့ ခေါ်တဲ့.. Access kiss နဲ့သုံးလို့ ရတာလည်း ရှိပါတယ်..
မြန်မာတယ်လီပို့ကတော့.. ADSL လိုင်းရယ်. BroadBand လိုင်းရယ်. iP Star ရယ် အပြင် စောစောလိုပဲ. Access kiss နဲ့လည်း၀ယ်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်.။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ မြန်မာတယ်လီပို့စ် က. Broadband လိုင်းကို အသစ်ချမပေးတော့ပါဘူး.. အဲဒီနောက်မှာတော့ အခု Wi-Max ဆိုတာ တစ်ခုထပ်ပေါ်လာတာပါ။..Red Link ကုမ္မဏီက ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်.. တခြား ဘယ်က ပေးသေးလဲဆိုတာတော့ ကျွန်တောလည်းမသိပါဘူး။
ADSL လိုင်း နဲ့ Access Kiss နဲ့ကတော့ ဖုန်းလိုင်းရှိမှ. သုံးလို့ရတာပါ။ Broadband တို့ Wi-Max တို့က တော့ ဖုန်းလိုင်း မလိုပါဘူး။ iP Star ကလည်း ဖုန်းလိုင်းမလိုပါဘူး ။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ဘယ်နားက ၀ယ်သုံးသုံး သုံးလို့ရပါတယ်လိုင်းထဲကနေ ဖုန်းလိုင်းပါပြီးသားပါ... စျေးတော့ ကြီးတယ်နော်... ယူတဲ့လိုင်းတွေရဲ့ Band Width တွေကတော့. 128 KB ရယ်. 256 KB ရယ်.. 512KB ၇ယ်ဆိုပြီးပေးနေပါတယ်..အခုနောက်ပိုင်း တချို့ ကတော့ 1MB ထိ ယူလို့ရနေပြီလို့ ပြောကြတာပဲ.... အခုနောက်ပိုင်းတော့.. ရတာနာပုံတယ်လီပို့ ကနေမှ..လိုင်းတွေအကုန်ပြန်ပေါင်းလိုက်.ပြီးတော့. အထက်မြန်မာပြည်ကို.အကုန်ပြန်ဖြန့်ပေးမယ်လို့ သတင်းကြားထားပါတယ်..ကျွန်တော်သိသလောက်လေး ပြောပေးတာပါ.။ အမှားပါရင်.လည်း ခွင့်လွှတ်ပါနော.်.....:68::68::68:
ကျေးဇူးပါ အခုလို ...ရှင်းပြတာကိုပဲ ....ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..ကိုzawtk သိတဲ့ သူများလည်း ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးစေလိုပါတယ်....အများ အပြောများတာကို အတည်ယူချင်လို့ပါ......:77:
သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ (or) အသိတွေထဲမှာ IADCS (International Advance Diploma in Computer Study) တက်နေတဲ့သူ
ရှရင်သူတို ့သင်နေတဲ့ Course တွေထဲက EN (Enterprise Network) ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ရင် ပိုပြီးပြည့်စုံမှာပါ..
အဲဒီစာအုပ်မှာ အများကြီပါပါတယ်...Mobile ကော Broadband တွေကော ISDN တွေနဲ ့နောက်ဆုံး Internet အကြောင်းကို ပါ
ဒီ Country မှာလဲ အဲဒီ Ncc Edu ကိုတက်နေတဲ့သူက လဲများတော့ မရှားလောက်ပါဘူး...
Eno wrote: »
ကျေးဇူးပါ ...အကို ...ကျနော် သူငယ်ချင်းတွေကို တောင်းပြီးပါပြီ သူတို့က exam ပြီးမှပေးမယ်တဲ့ exam ရှိလို့ပါတဲ့ ....သူတို့ဆီက စောင့်နေရင် ကျနော် Book က ပြီးမှာ မဟုတ်လို့ပါ......ကျနော် လို့ ချင်တာ အများလက်ခံနားလည် ထားတဲ့ ....connection type တွေပါ.....သိတော့သိထားတာပေါ့ ..ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မပြည့်စုံဘူးလို့ထင်လို့ပါ......အများ သဘောတူတာလို ချင်လို့ပါ......:)